राष्ट्रपतिले भनिन् ‘मेरो सरकार’, सुन्दा राजाको झल्को, शुरु भयो विरोध र आलोचना | ImageKhabar <!-instant articles-->
राष्ट्रपतिले भनिन् ‘मेरो सरकार’, सुन्दा राजाको झल्को, शुरु भयो विरोध र आलोचना
काठमाडौं, बैशाख २० । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दा पटक पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यसरी सम्बोधन गर्दा पूर्ववर्ती राजा/महाराजाहरुले संसदलाई सम्बोधन गरेको झल्को दिइरहेको थियो ।
राजाको समयमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमको शैलीमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदमा प्रस्तुत भएपछि विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा विरोध शुरु भएको छ ।
गणतन्त्रमा राजाले प्रयोग गर्ने ‘मेरो सरकार’को शब्दावलीलाई उस्तै भाव र शैलीमा प्रयोग गरिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ’नेपाली जनताले बनाएको सरकार छ कि राष्ट्रपतिको सरकार ?’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । ‘राजाकै शैलीमा राष्ट्रपतिको संवोधन शैली हुने भनी संविधानमा कहाँ उल्लेख छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
‘कुनैबेला श्री ५ को सरकार थियोे, राजाले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्थे । आज राष्ट्रपतिले उही शैलीमा भन्न मिल्ने हाम्रो संविधानको कुन धारामा व्यवस्था छ ?’ भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका हुन् ।
कांग्रेस नेता एवं सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिको सम्बोधन सकिएएलगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग ‘मेरो सरकार’ भनेर राजा, महाराजाको झल्को दिन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले ट्वीट पनि गर्दै, ‘महामहिम ज्यूको’ निजी सरकारको कार्यक्रम घोषणा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘म त नेपाल सरकारको (जनताको सरकार) नीति तथा कार्यक्रम सुन्न संसदमा उपस्थित भएको, यहाँ त राष्ट्रपतिज्यूबाट महामहिमज्यूको निजी सरकारको कार्यक्रमको पो घोषणा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न कहाँ, कहिले आउँ होला?’ राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दागर्दै उनले गरेको ट्वीटमा उल्लेख छ ।
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले त राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महारानी नै घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विद्या सरकारका प्रजा भन्दै आश्चर्य भाव प्रकट गरेका छन् ।
संग्रौला ट्वीट गर्दै भन्छन्, ‘बल्ल आयो पारा ! पहिले श्री ५ को सरकार छँदा राजा ‘मेरो सरकार’ भन्थे । अहिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपति विद्याले प्वाक्क ‘मेरो सरकार ’ भनिन् । भनेसी प्रम ओली विद्या सरकारका प्रजा भएछन् । म त भन्छु– तै तै विद्यालाई महारानी घोषित किन नगर्ने ? माग्नु छ मोही, ढुंग्रो किन लुकाउने ?’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राष्ट्रपतिको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘यो सार्वभौम नेपाली जनताको सरकार हो कि राष्ट्रपतिको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले पुरानै चलनको पुनरावृत्त गरेको उल्लेख गरे ।